China 5X-12 muchina wekuchenesa mbeu /mhodzi yekuchenesa mbeu yesesame chia mhodzi yemhunga yesoya vagadziri nevatengesi | SYNMEC
5X-12 muchina wekuchenesa mhodzi / mbeu yekuchenesa mbeu yesame chia mhodzi yemhunga soya bean
5X-12 Fine Seed Cleaner inoshandiswa kuchenesa nekuisa magadhi mhodzi, zviyo, zviyo, uye zvimwe zvigadzirwa zvegranule.
5X-12 Zvakanaka Muchenesa Mbeu inoshandiswa kuchenesa uye kuisa mhodzi, zviyo, zviyo, uye zvimwe zvigadzirwa zvegranule.
Inogona kuve yakashongedzerwa kuti ienderane akasiyana akasiyana akakosha mabasa uye zvinangwa.
Guruva nekusachena kwakareruka zvinobviswa neaspirator feni uye feni inofuridza pasi. Material anowira pamusoro seeve akaturikidzana uye akaparadzaniswa nesefa maererano upamhi uye ukobvu musiyano. Tsvina dzese dzakakura uye dzakaderera dzakaburitswa kubva munzvimbo dzakasiyana.
5X-12 Fine Seed Cleaner ndiyo yakakosha uye inonyanya kufarirwa muchina wekuchenesa muindasitiri yembeu uye zviyo pamusika wepasirese, ine hunyanzvi hwepamusoro, kuita kwakanakisa, kushandiswa kwakakura.
Yakakodzera kugadzira marudzi ese embeu, zviyo, zviyo mhando nezvirimwa, segorosi, paddy, mupunga, zvishoma, chibage, mapfunde, kumini, mhodzi yesunflower, soya, kofi bhinzi, cocoa bhinzi, mhodzi dzemafuta, nezvimwe.
Yakagadziridzwa skrini gomba saizi uye akasiyana emuchina musanganiswa anobvumira Iyo Yakanaka Mbeu Yekuchenesa kuti ishandiswe kune akasiyana maapplication uye kuwedzera giredhi kushanda zvakanaka.
Dimension(L×W×H) 3720×1750×4060 mm
Kurema kwese 3600 kg
Rated capacity 12 Matani/h
Huwandu hwemhepo hwese 12520 m3
Vibration sieve mota (giya mota) 2.2 kW
Kumashure kusimudza system mota 3.0 kW
Kudyisa mota 1.5 kW
Kumashure kunosimudza air blower Rotary speed 100～1000 r/min
Screen Type kuboora sikirini
Imwe neimwe Screen Dimension (L×W) 800×1250 mm
Frequency 300(80～400) nguva/min
Layer uye nhamba 5 akaturikidzana, zvidimbu gumi nezvishanu
Yese Screen Nzvimbo 15 m2
Zvakapfuura: 5XQS-5 Destoner yechibage coffee bean paddy mupunga we sesame chia seed
Zvinotevera: 5X-5 muchina wekuchenesa mbeu / zviyo zvekuchenesa mbeu yesoya sesame chia mhodzi yechibage nzungu
5xzc Muchenesa Mbeu
Muchina Wekuchenesa Mbeu yeChina
Muchina weKuchenesa Mbeu
Muchenesa Mbeu Kutengeswa
5X-5 yakanaka yekuchenesa mbeu / mbeu yekuchenesa mac...